कोलकत्ता नाइट राईडर्स दिल्ली क्यापिटल्ससँग सुपर ओभरमा पराजित भयो
एजेन्सी । इन्डियन प्रिमियर लिग “आईपीएल” को दशौं खेलमा कोलकाता नाइट राईडर्सलाई दिल्ली क्यापिटल्सले सुपर ओभरमा पराजित गरेको छ । सुपर ओभरमा दिल्लीले प्रस्तुत गरेको ११ रनको लक्ष्य पछ्याउन नसक्दा कोलकाता पराजित भएको हो ।दिल्लीका कागीसो रबाडाको पहिलो बलमा कोलकाताका आन्द्रे रसेलले चौका प्रहार गरेका थिए । दोस्रो बलमा रन जोड्न नसकेका रसेल तेस्रो बलमा […]
एजेन्सी । लिग लिडर बार्सिलोनाले स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा स्पानियोलमाथि सहज जित हात पारेको छ ।शनिबार राति भएको खेलमा बार्सिलोनाले आफ्नै घरेलु मैदानमा स्पानियोललाई २–० गोलअन्तरले पराजित गरेको हो । बार्सिलोनाको जितमा कप्तान लियोनल मेस्सी नायक बने । उनकै दुवैै गोलमा बार्सिलोनाले स्पानियोलमाथि जित हात पारेको हो । पहिलो हाफसम्म बार्सिलोनालाई स्पानियोलले गोलरहित बराबरीमा रोकेको […]
बेंगलोरको घरेलु मैदानमा मुम्बईको जित
March 29, 2019 March 29, 2019 Subas B.K0
एजेन्सी – इन्डियन प्रिमियर लिग “आईपीएलमा” को सातौ खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरमाथि मुम्बई इन्डियन्सले रोमान्चक जित हात पारेको छ ।विहीबार राती सम्पन्न खेलमा लाथिस मलिङ्गाले अन्तिम ओभरमा जितको लागि १७ रन चाहिएको अवस्थामा ११ रन मात्र खर्चिएपछि मुम्बईले ६ रनको रोमान्चक जित हात पारेको हो । १ सय ८८ रनको लक्ष्य पक्ष्याएको बंगलोरले निर्धारित २० […]
March 28, 2019 March 28, 2019 Subas B.K0
पहिलो दिनको खेलमा रामघाट चर्च, लामाचौर चर्च, भेडिफार्म बप्तिष चर्च तथा नयाँगाउँ चर्च विजयीपोखरा । पोखराका चर्चहरुभित्र रहेका फुटबल खेल प्रतिभालाई उजागार गर्ने तथा युवाहरुबीच एक आपसमा भाइचारा तथा एकतालाई अझै उजागार पार्ने उद्धेश्यले नयाँगाउँ पोखरा अवस्थित नयाँगाउँ चर्चका युवाहरुको आयोजनामा तेस्रो नयाँगाउँ चर्च अन्तरमण्डली सेभेन ए साइड प्रतियोगिता भव्यताका साथ सुरुवात भएको छ । […]
आइपिएल २०१९ः गेलको विष्फोटक ब्याटिङ, पञ्जावले राजस्थानलाई १४ रनले हरायो
March 27, 2019 March 27, 2019 Subas B.K0
एजेन्सी । इण्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट खेल अन्तर्गत किंग्स इलेभेन पञ्जावले राजस्थान रोयल्सलाई १४ रनले हराएको छ । जयपुरस्थित राजस्थानको होम ग्राउण्डमा भएको खेलमा क्रिश गेलले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेपछि पञ्जावले जित निकालेको हो ।टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको पञ्जावले २० ओभरमा चार विकेट गुमाउँदै १८४ रन बनाएको थियो । पञ्जावका लागि क्रिश गेलले विस्फोटक ब्याटिङ […]
March 25, 2019 March 25, 2019 Subas B.K0
एजेन्सी । आईपिएलको १२ औं संस्करणमा नयाँ नाम सहित उत्रेको उत्तरी दिल्लीको टोली दिल्ली क्यापिटल्स आइतबार सम्पन्न पहिलो म्याचमा मुम्बई इण्डियन्सलाई ३७ रन ले पराजित गरेको छ।पहिले ब्याटिङमा उत्रेको दिल्लीले पहिलो ब्याटिङ गर्दै ६ विकेटको क्षतिमा बनाएको २१३ रनको स्कोरलाई मुम्बईले पछ्याउन नसकेपछि लिगमा उसले विजयी सुरूवात गरेको हो। जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको मुम्बईले घरेलु मैदान […]
एजेन्सी – अलराउण्डर आन्द्रे रसेलले विश्फोटक ब्याटिङ गरेपछि ईन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएलको दोस्रो खेलमा कोलकता नाइट राइडर्सले विजयी सुरुवात गरेको छ । कोलकताले हैदरावादलाई ६ विकेटले हराउँदै सुखद सुरुवात गरेको हो । १ सय ८२ रनको लक्ष्य पछ्याएको कोलकताले २ बल अगाडीनै ४ विकेट गुमाउँदै १ सय ८३ रन बनायो । कोलकताको जितमा आन्द्रे रसेलले […]
March 24, 2019 March 24, 2019 Subas B.K0
शनिबारदेखि सुरु भएको इण्डियन प्रिमियर लिगको पहिलो खेलमा चेन्नई सुपर किंग्स विजयी भएको छ । घरेलु मैदान एमए चिदम्बरम स्टेडियममा भएको खेलमा चेन्नईले रोयल च्यालेञ्जर्स बेंग्लोरलाई ७ विकेटले पराजित गर्‍यो ।टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको बैंग्लोर १७।१ ओभरमा ७० रनमा अलआउट भयो । उसका लागि पार्थिव पटेलले सर्वाधिक २९ रन बनाए भने अन्य कुनै पनि […]
March 21, 2019 March 21, 2019 Subas B.K0
बिबिसी । बीस वर्ष हाराहारीको उमेर हुँदा के तपाईँलाई कसैले परिपक्व बन्नुपर्छ भनेका थिए ? अथवा त्यो उमेरमा तपाईँलाई इन्टरनेटमा बिरालोका रमाइला भिडियो हेर्ने रहर बाँकी थियो ? यदि त्यसो हो भने तपाईँ किन त्यो उमेरसम्म वयस्क जस्तो व्यवहार गरिरहनु भएको छैन भन्ने कुराबारे वैज्ञानिक कारण हुनसक्छ। मस्तिष्क अध्ययन गर्ने वैज्ञानिकहरूका अनुसार मानिसहरू ३० वर्षको […]
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली ख्रीष्टियान मिडिया समिट सम्पन्न
काठमाडौँ । विश्वभरी छरिएर रहेका नेपाली ख्रीष्टियान संचारकर्मी, साहित्यकार, लेखक तथा सर्जक अनि पत्रकारिताको क्षेत्रमा रुचि राख्ने व्यक्तिहरुको वृहत भेला चैत्र १ र २ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ । नेपाली ख्रीष्टियान मिडियाकर्मीहरुलाई व्यवसायिकता तर्फ अझै उकास्ने उद्धेश्यले सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा नेपाल, भुटान, भारत, हङकङ, अमेरिका, बेलायतबाट समेत साहित्यकार तथा संचारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो […]
March 14, 2019 March 14, 2019 Subas B.K0
एजेन्सी । स्पेनिस क्लब बार्सिलोना च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । बुधबार राति आफ्नै घरेलु मैदानमा भएको दोस्रो लेगमा बार्सिलोनाले फ्रान्सेली क्लब लियोनलाई ५–१ गोलअन्तरले पराजित गर्दै च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको हो । बार्सिलोनाले पहिलो र दोस्रो लेग गरी समग्रमा ५–१ गोलकै जित निकालेको हो । यसअघि भएको पहिलो लेगमा बार्सिलोना र […]